Oke Osimiri Ionia na agwaetiti ya | Akụkọ Njem
Oke Osimiri Ionia na agwaetiti ya
Mariela Carril | | Greece, Islands
Na ezumike na Greece n'otu oge mmadụ na-esi n'ọdụ ụgbọ mmiri ruo agwaetiti, na n'okwu a enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ. Enwere agwaetiti mara mma ma n'etiti ha bụ Agwaetiti Greek nke Osimiri Ionian, ogwe Osimiri Mediterenian nke bụbu ụzọ azụmahịa dị n'etiti Gris na Rome.
Ma na mgbakwunye na akụkọ ihe mere eme o nwere, taa ọ bụ agwaetiti ya ndị mara mma na-enwu gbaa. Ka anyị chọpụta na anyị nwere ike ịga leta, hụ ma nwee ọ .ụ Ebe a.
1 Oke Osimiri Ionia
2 Agwaetiti nke Osimiri Ionian
Oke Osimiri Ionia
Dị ka anyị kwuru n'elu, a na-ewere ya dị ka ogwe aka nke mediterranean enye okodu ke edem usụk Inyan̄ Adriatic. N'ebe ọdịda anyanwụ ya bụ andtali na n'ebe ndịda Albania, agwaetiti ndị na-akpọ anyị taa na mba Gris. Ejikọtara Oké Osimiri Ionian, site na Strait nke Messina, na Oké Osimiri Terrestrial yana kwa Oké Osimiri Adriatic site na ọwa Otranto.
Ndị na-amụ banyere ọdịdị ala na-ekwu na n'oge ochie a na-akpọ oké osimiri a Oké Osimiri Poros, ma tupu a na-akpọ ya Oké Osimiri Cronus na Rhea. Echiche banyere mmalite aha ya dị ọtụtụ. Ọ bụrụ na anyị ahụ ya site n'elu Oké Osimiri Ionia nwere ụdị triangle ụfọdụ ma ọ bụrụ na anyị etinye uche n'akụkụ ebe ndịda ọ bụ ebe Mediterenian nwere omimi miri emi, ọbụlagodi ogologo na nnukwu ọwa mmiri nke na-egosi ókèala ya na efere Africa. Si ebe a na- ala ọma jijiji na mpaghara
Dabere na ọnọdụ nke agwaetiti ndị ahụ, e kewara Oké Osimiri Ionian na ngalaba n'akụkụ, site n'ebe ugwu ruo na ndịda, Oké Osimiri Himara, Oké Osimiri Corefu, Oké Osimiri Paxos, Osimiri Tilevois, Oké Osimiri Echinades, Oké Osimiri Patras. Oke Osimiri Kythira.
Agwaetiti nke Osimiri Ionian
Ha bụ pel nke a turquoise na-acha anụnụ anụnụ na oké osimiri. Agwaetiti ahụ nwere usoro ọdịdị ala dị egwu na ahịhịa ndụ na ụsọ mmiri Chineke. Agwaetiti nke Osimiri Ionian bụ Corfu, Ithaca, Kefalonia, Kythira, Lefkada, Paxos na Zakynthos. Ndị a bụ ebe ị ga - ahọrọ mgbe ị na - atụle njem na Osimiri Ionian. Kedu nke ị họọrọ?
Corfu ọ bụ otu n'ime agwaetiti ndị bụ isi, maka ọtụtụ agwaetiti kacha mma si na mba. Mmiri na-ezo ọtụtụ otú ọ bụ a Green Island dị mfe ịnweta site na Bari, ,tali, ma ọ bụ site na Venice ma ọ bụ Ancona. Yabụ ọ bụrụ na ị gafee Italytali gaa Gris, nke a ga-abụ ala Gris mbụ na ụzọ gị. Lee ị nwere ntakịrị ihe niile n'ihi na ebe ụsọ oké osimiri agbanweela ibu njem nleta Inland ị ka na-ahụ ọmarịcha obodo nta kwụsịrị amia track.
N'ebe ọwụwa anyanwụ ụsọ mmiri, nke chere ihu Albania, enwere coves na obere okwute mmiri, na n'akụkụ ọdịda anyanwụ odida obodo ahụ adịkwaghị ire ụtọ kama nkọ, okwute na ugwu ọtụtụ ihe na-emeghe. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ mmadụ ole na ole, n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ ya enwere obere agwaetiti atọ anaghị ebi na oke osimiri aja aja mara mma.
Ithaca bụ ama agwaetiti odysseus. Bụ a agwaetiti ugwu ugwu ya na otutu nkume n’ebe nile na nma ubi oliv. Nwere ọtụtụ ihe ochie, obodo azu na osimiri. O nwere ọtụtụ ụzọ ije na isi obodo, Vathy, bụ obere obere obodo mara mma. Na nkenke, Ithaca bụ ezigbo maka njem o nwekwara obere osimiri buru ibu.
Kefalonia ọ tara nnukwu ala ọma jijiji na 1953 ma kemgbe ahụ ọtụtụ ndị obodo họọrọ ebe ọzọ ibi, yabụ taa ndị bi na ya nwere ọtụtụ ndị Britain, ndị Italitali na ndị America. Bụ a nnukwu agwaetiti nke nwere ọgba na ọdọ mmiri na mma osimiri. Argostoli bu isi obodo ya, dika ihe egwuregwu. Lee ya ebe a Fiscardo, maka ọtụtụ n'ime obodo mara mma kachasị mma na Gris dum, agwaetiti ahụ na-abụkarịkwa ebe nkwụsị maka yaths. Ihe nkiri ahụ na-amasị gị Capol Corelli si mandolin? Ọfọn, lee, a na-ese ya.
kịta ọ bụ ihe ewu ewu na ndị Atens bara ọgaranya. Ọ dị ndịda Peloponnese ma ị nwere ike isi ebe ahụ gaa Piraeus (ọdụ ụgbọ mmiri nke Atens), ma ọ bụ site na Krit. N'oge dị elu ọ na-esiri ike ịchọta ebe obibi, ọkachasị n'August, mana ọ bụrụ na ịpụ n'oge, ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya. Na-emekarị na-anọgide pụọ na egwu egwu haziri ndị ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ya, ị ga-aga nke gị.
Ọzọkwa o nwere otutu akuko ebe ọ bụ na ọnọdụ ya dị n'oké osimiri mere ka ndị ahịa na ndị meriri gafere ya. Yabụ, ị nwere ike ịhụ frescoes Byzantine na narị afọ nke XNUMX n'ọgba ma ọ bụ arụsị ọla nchara site na mmepe Minoan n'elu ugwu. Akụkọ ihe mere eme na osimiri, lee ezigbo nchikota!
Lefkada jikọtara ala mmiri site na akwa mmiri na-agafe ọwa mmiri. Obodo kachasị njem nleta na agwaetiti ahụ bụ Nydri ma site ebe a ị nwere ike iburu ụgbọ mmiri ga-akpọrọ gị ịhụ agwaetiti ndị gbara ya gburugburu dị ka ama ama Agwaetiti Skorpio nke Aristotle Onassis dere. Ọ bụrụ n’ịnweghị abalị, ịnwere ike ịba bọs na Atens na ọdụ ụgbọ A nwere ugboro atọ kwa ụbọchị. Ọ na-ewe ihe dị ka awa ise na ọkara ma ọnụego ahụ dị ihe dị ka euro 30.
Lefkada nwere osimiri ya mana agwaetiti ndị gbara ya gburugburu ka mma na nke a. Maka nke ya Paxos bụ agbata obi nke Corfu mana ọ nwere obere njem. Ọ nwere ike ịbụ ebe njedebe n'onwe ya ma ọ bụ a ụbọchị njem si Corfu, dị ka ọ masịrị gị. Ọ bụ obere agwaetiti, nke dị naanị kilomita iri na atọ n’ogologo enwere ike iji ụgbọ mmiri rute. O nwere ebe ochie nke Venet na oke osimiri dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na-agba pebb, ma ndị nọ n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ dị ka ihe nkiri, nke nwere nnukwu ugwu na ọgba, gburugburu iri anọ, nke ụgbọ mmiri nwere ike iru.
N'ikpeazụ, otu agwaetiti nke nyeworo ụwa nke ihe oyiyi otu ihe a na-agaghị echefu echefu: Onyekachukwu. N’otu n’ime ụsọ mmiri ya, ụgbọ mmiri ekpu, mkpọmkpọ ebe nke ụgbọ mmiri na-echegbu onye ọ bụla n’oge agbagharị ala mana n’ikpeazụ mebere agwaetiti ahụ ama. Na nke a, anyị nwere ike ịgbakwunye na n'ụsọ oké osimiri nke ọzọ enwere ọrụ maka nchekwa nke ọdụ ụgbọ mmiri Caretta - Caretta. Nke a bụ ebe ha na-eyi akwa ha ka ọ bụrụ ebe echekwara.
Oke Osimiri Ionia bu ezigbo njem njem ma ndia bu agwaetiti ya. Olee ndị ị họọrọ ịma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Oke Osimiri Ionia na agwaetiti ya
Ihe ị ga-ahụ n'ụsọ mmiri Italiantali
Osimiri Paradaịs nke ụwa